Search အပြာကားရုယ် - GenFK.com
ဒီနေ့တော့တရုတ်လိုအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အရေးကြီးပြီး အသုံးဝင်တဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိတ်ဆက်စကားလေး အချို့ အကြောင်းတွေကိုလေ့လာကြရအောင် ပိုနားလည်လွယ် videoနှင့်ထပ်တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ （1.）大家 dà jiā (လူအားလုံး) (တာ့ ကြာ) （2.）的 dē (၏/ရဲ့) (ဒယ်င်) （3.）名字 míng zì (နာမည်) (မင် ကျီ့) （4.）今年 jīn nián (ဒီနှစ်) (ဂျင် နှိမ်) （5.）岁 suì (အရွယ်/အသက်) (ဆွေ့) （6.）住 zhù (နေထိုင်သည်) (ကျူ့) （7.）缅甸 miǎn diàn (မြန်မာနိုင်ငံ) (မြိန် တိန့်) （8.）家 jiā (အိမ်) (ဂျာ) （9.）里 lǐ (အထဲ) (လီ) （10.）有 yǒu (ရှိသည်) (ယို) （11.）口 kǒu (ပါးစပ်) (ခို) （12.）人 rén (လူ) (ရိန်) （13.）爸爸 bà ba (ဖေဖေ) (ဘာ့ ဘာ) （14.）妈妈 mā ma (မေမေ) (မား မာ) （15.）和 hé (နှင့်/နဲ့) (ဟို) （16.）个 gè (ခု) (ကယ့်) （17.）上 shàng (အပေါ်/တက်သည်) (ဆန့်) （18.）年级 niān jí (အတန်း) (နှိမ် ကျီ) （19.）位 wèi (ဦး) (ဝေ့) （20.）名 míng (ဦး/ယောက်) (မင်) （21.）是 shì (ဖြစ်သည်/ဟုတ်သည်) (စီ့) （22.）喜欢 xǐ huān (နှစ်သက်သည်) (ရှီ ဟွမ်) （23.）中文 zhōng wén (တရုတ်စာ) (ကျူံ ဝန်) （24.）现在 xiàn zài (အခု) (ရှိန့် ကြိုက်) （25.）也 yě (လည်းဘဲ) (ရယ်) （26.）在 zài (နေတယ်) (ကြိုက်) （27.）很 hěn (အရမ်း) (ဟန်) （28.）高兴 gāo xìng (ဝမ်းသာတယ်) (ကောင် ရှင့်) （29.）认识 rèn shì (သိခွင့်ရသည်) (ရိန့် စီ့) （30.）我 wǒ (ကျွန်တော်/ငါ) (ဝေါ်) （31.）们 mēn (အများသဘော) (မိန်) （32.）你 nǐ (ခင်ဗျာ/မင်း) (နီ) （33.）谢谢 xiè xiě (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်) (ရှယ့် ရှယ်) （34.）大学生 dà xué shēng (တာ့ ရွှဲ ဆန်) (တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား) （35.）兄弟姐妹 xiōng dì jiě mèi (ရှူံ တိ ကျယ် မိန့်) (ညီကိုမောင်နှမ) （36.）城 chéng မြို့ (ချုံန်) ဒါဆိုရင်ခုဘဲလေ့လာလိုက်ကြရအောင် Hello အားလုံးဘဲမင်္ဂလာပါ 🙏 Chinese Today -CT ကနေကြိုဆိုပါတယ်❤️ #အမှားတွေပါရင်ထောက်ပြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ပါခဲ့ရင်လည်းကြိုတင် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ🤗 သင်ခန်းစာသစ်လေးတွေထပ်မံထပ်မံတင်ပေးဖို့အတွက် post လေးကို ➡️like and share ➡️comment and follow လေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာ အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်❤️ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါနော်🥰 #ChineseToday-CT #LearnChinese❤️ #likeandshare #commentandfollow #chinesemyanmar #chineseonlinelearning
Chinese Today - CT
15 Sep 2021 · 25K views
မ င်းမ သိအောင် ချ စ် မ ယ်
မ င်းမ သိအောင် ချ စ် မ ယ် ဒီလေး- ဂျီ လ တ် https://www.youtube.com/watch?v=t5lgKQpzGSU မ လွ မ်းပဲ မနေ နို င်အောင် မ င်းလု ပ် ခဲ့ တ ယ် မ ချ စ် ပဲ မနေ နို င်အောင် မ င်းရဲ့ အ ပြုံးရ ယ် နှ လုံးသား ဒ ဏ် ရာေ တွ မ င်းမပေးပဲ နဲ့ ရ ရှိ ခဲ့ တာဘာေ ကြာင့် လဲ ချ စ် ခဲ့ တာေ တွ ကို ယ့် အ မှား များ လား ကွ ယ် ဖွ င့်ပြောဖို့ ဆို တာဘ ယ် လို မှ မ ဖြ စ် ခဲ့ ပါ ဆုံးရှုံးမှာကို ကြိုတွေးမိ ခဲ့ လ ည်းမ င်းမ သိအောင် ချ စ် မ ယ် တ က ယ် ဆို မ င်းနား လ ည် မှာပါ အ ချ စ် ရ ယ် ခ င် မ င် မှု အရောင် များ ပျ က် ပြ ယ် ဒီ လို နဲ့ဝေးမှာကို ကြို သိ လ ည်းအ ချ စ် ရ ယ် ယုံ ကြ ည် ပါ သီ ချ င်းေ လးကပြောလိ မ့် မ ယ် မှ တ် မိ နို င် စ ရာညလေးရှိ ခဲ့ တ ယ် မ င်းအ နားနေ ရ င် အပျော် ဆုံးမှ တ် ခဲ့ တ ယ် ဘ ယ် သူ မှ မ မြ င်အောင် ကို ယ် ချ စ် ခဲ့ မိ လ ည်းနှ လုံးသားလေးရ ယ် ဘ ယ် လိုဖြေ မ လဲ ချ စ် ခဲ့ တာေ တွ ကို ယ့် အ မှား များ လား ကွ ယ် ဖွ င့်ပြောဖို့ ဆို တာဘ ယ် လို မှ မ ဖြ စ် ခဲ့ ပါ ဆုံးရှုံးမှာကို ကြိုတွေးမိ ခဲ့ လ ည်းမ င်းမ သိအောင် ချ စ် မ ယ် တ က ယ် ဆို မ င်းနား လ ည် မှာပါ အ ချ စ် ရ ယ် ခ င် မ င် မှု အရောင် များ ပျ က် ပြ ယ် ဒီ လို နဲ့ဝေးမှာကို ကြို သိ လ ည်းအ ချ စ် ရ ယ် ယုံ ကြ ည် ပါ သီ ချ င်းေ လးကပြောလိ မ့် မ ယ် တ က ယ် ဆို မ င်းနား လ ည် မှာပါ အ ချ စ် ရ ယ် ခ င် မ င် မှု အရောင် များ ပျ က် ပြ ယ် ဒီ လို နဲ့ဝေးမှာကို ကြို သိ လ ည်းအ ချ စ် ရ ယ် ယုံ ကြ ည် ပါ သီ ချ င်းေ လးကပြောလိ မ့် မ ယ်
16 Jan 2019 · 805K views
ယ့် ကို ယုံ ကြည် မှု confident ရှိ အောင် ဘယ် လို နေရ မလဲ ?
✴ ကိုယျ့ ကို ယုံ ကွညျ မှု confident ရှိ အောငျ ဘယျ လို နရေ မလဲ ❓ 👀 Eye contact , Body language & body posture ဘာတှေ ပွု ပွငျ ပွောငျးလဲ ရမလဲ❗ ✴ ကိုယ့် ကို ယုံ ကြည် မှု confident ရှိ အောင် ဘယ် လို နေရ မလဲ ❓ 👀 Eye contact , Body language & body posture ဘာတွေ ပြု ပြင် ပြောင်းလဲ ရမလဲ❗
Sithu kyaw vlog
8 Mar 2019 · 7.7K views
​လောကမှာ မာတာပိတ မိဘအ​မွေ ခံယူထိုက်​​သော သားသမီးများ _______ _______ _______ ___________ _________ ၁ ။ သြရသ _ ရင်​၌ ဖြစ်​​သော သားသမီး ။ ၂ ။ ​ဟေဌိမ _ မယားကြီးရှိလျက်​ အထင်​အရှား မယားငယ်​​နေ၍ _ ထိုမယားငယ်​နှင့်​ ရ​သောသားသမီး ။ ၃ ။ ကိတ္တိမ _ အခြားသူတို့ သားသမီးကို အ​မွေစားအ​မွေခံပြုမည်​ _ ဟု စာချုပ်​ချုပ်​ဆို၍ ​မွေးစာ​သော သားသမီး ။ ၄ ။ ​ခေတ္တဇ _ လင်​ပါမယားပါ နှစ်​ပါးစုံ ​ငွေဝယ်​ကျွန်​မနှင့်​ သင့်​မြတ်​ _ ၍ ရ​သောသားသမီး ။ ၅ ။ ပုဗ္ဗက _ မယားပါလင်​ပါ ​ဒွေပုဗ္ဗက အထက်​ပါ သားသမီးနှစ်​မျိုး ၆ ။ အပတိဌ _ အမှတ်​တမဲ့ ​ကောက်​ယူ​မွေးစား​သော သားသမီး _ဟူ၍ ရှိကြ​လေ၏ ။ ​လောကမှာ မာတာပိတ မိဘအ​မွေ မခံယူထိုက်​​သော သားသ္မီးများ ________________________ ______________________ ၁ ။ ပရဒိန္န _ သားရင်းမှန်​လျက်​ သူတစ်​ပါးသို့ ​ပေးအပ်​လိုက်​ _ ​သော သားသမီးများ ။ ၂ ။ သ​ဟောဂ္ဂ _ ဥစ္စာနှင့်​ဝယ်​၍ သားပြု​သော သားသမီး ။ ၃ ။ ​ပေါနနုဗ္ဘာ _ မိမိမယား သူတစ်​ပါးနှင့်​ မှား၍ ရ​သောသားသ္မီး ၄ ။ ကိဌိသ _ အ​ပျော်​ ကြူး၍ ရ​သော သားသမီး ။ ၅ ။သွာနုတ္တ _ မိဘအာဏာကို ဆန်​၍ ရန်​သူကဲ့သို့ ကျင့်​​သော _ ​ကြောင့်​ နှင်​ထုတ်​အပ်​​သော သားသမီး ။ ၆ ။ဆဒဘတ္တ _ ငတ်​မွတ်​သူကို ​ကျွေး​မွေး၍ သားသမီး​ ခေါ်သူ _ များ ။ ၇ ။ ​ခေတ္တ _ နှစ်​ပါးမိဘ ထိမ်းမြှား​သော လင်​ကို မိန်းမငယ်​ _ မနှစ်​သက်​သဖြင့်​ သူတထူးနှင့်​ ဆက်​ဆံ၍ရ _ ​သော သားသမီး ။ ၈ ။ပရသုချိန်​ _ သူတို့ချင်း ဘာသာကျွမ်းဝင်​၍ ရ​သော သားသ္မီး ၉ ။ ဝိဝါသုချိန်​ _ မိဘ မထိမ်းမြှားဘဲ ယူ​သော သားသမီး ။ ၁၀ ။ မုထလန _ လင်​ရ၍ ကိုးလလွယ်​ဆယ်​လမ​ရောက်​ခင်​ ရ _ ​သော သားသမီး ။ ၁၁ ။ အမတ္တဟတ္တ_ အမျိုးအ​ဆွေတို့နှင့်​ လိုက်​၍ အ​ဝေးမှာ ဖွား _ မြင်​​သော သားသမီး ။ ၁၂ ။ ကာနိယ _ လင်​​ကောင်​မရှိဘဲ ဖွားမြင်​​သော သားသမီး ။ ၁၃ ။ ဟတ္တ _ လင်းတည်းမ​နေဘဲ အခြားလင်​များနှင့်​ ကိုယ်​ _ ဝန်​ရ၍ ဖွားမြင်​​သော သားသမီး ။ ၁၄ ။ ဂိမှီဝတ်​ _ မိန်းမကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ကို ဝယ်​၍ ရ​သော သား _ သမီး ။ ၁၅ ။ ဝိကရ _ လင်​နှင့်​ တစ်​ဖန်​ပြန်​၍ ရ​သော သားသမီး ။ ၁၆ ။ ရထန _ အမူမ​ကောင်း၍ အမိအဖနှင့်​ လိုက်​​နေရာမှ _ ​မွေးရ​သော သားသမီး ။ ၁၇ ။ ဖဿ _ အဖပုဏ္ဏား ၊ အမိပု​ဏ္ဏေးမ မဟုတ်​ဘဲ ရ​သော _ သားသမီး ။ ၁၈ ။ မုဋဇ _ အကြင်​အရပ်​၌ ကျင်​လည်​၍ ရ​သော သား _ သမီး ။ ၁၉ ။အ​န္တေဝါသိက_ အတတ်​ပညာကို ဆည်းကပ်​​သော သား _ တပည့်​ ။ ၂၀ ။ သွပ္ဗယိုသား _ သီလရှင်​က ​မွေးဖွား​သော သားသမီး ။ ၂၁ ။ သံဃ _ ရ​သေ့ ရဟန်းအဖြစ်​နှင့်​ရ​သော သားသမီး _ ဟူ၍ ရှိကြ​လေ၏ ။ ✍✍✍ အထက်​ပါ ပို့စ်​အား ချစ်​​သော မိတ်​​ဆွေတို့ ဗဟုသုတ တစ်​စုံတစ်​ရာ ရ​စေလိုခြင်း အကျိုးငှါ... ...... ( သမူဟ ဎုဝိ​စ္ဆေဒနီ ဓမ္မသတ်​ချုပ်​)မှ ...... မျှ​ဝေတင်​ပြပြီး ငါးရာ့ငါးဆယ်​ ဇာတ်​နိပါတ်​ ​တော်​လာ " နန္ဒိယမိဂရာဇ ” ဇာတ်​​တော်​အား ကြည့်​ရှူ နားဆင်​ရင်း အမိအဖအား လုပ်​​ကျွေးသမု ပြုစုနိုင်​​၍ အ​မွေခံထိုက်​​သော သား​ကောင်းသမီး ရတနာများ ဖြစ်​နိူင်​ကြပါ​စေ...... 👤✍✍✍ ....... ​လေးစားစွာဖြင့်​.... . 👤👤👤PAR AMI
4 Feb 2018 · 1.3K views
Why ငနီ died? ဘာ​ကြောင့်​ ကိုနီ အသတ်​ခံရလဲ။ မြန်​မာပြည်​မှာ တရားဝင်​​နေထိုင်​တဲ့ကလားဆိုလို့ ၁၀% မ​ပြောနဲ့ ၁၀ ရာခိုင်​နှုန်းရဲ့ ဆယ်​ပုံတစ်​ပုံ​လောက်​ပဲ ရှိပါ​သေးတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ကိုနီကြိုတင်​ကြံစည်​စဉ်းစားခဲ့တဲ့ ကလားဆယ်​ရာခိုင်​နှုန်းရှိတယ်​ဆိုတာ တရားမဝင်​​သေးတဲ့ကလား တွေကို တရားဝင်​​သွား​အောင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ယူရမလည်းလို့ ကြိုတင်​အကွက်​ချထားပြီး ဖြစ်​ခဲ့တယ်​ဆိုတာ ယ​နေ့ (၂၂ရက်​ ၇လ ၂၀၁၉)မှာအတည်​ပြုခဲ့တဲ့ က​လေးနှစ်​​ယောက်​​မွေးစားပိုင်​ခွင့်​ဥပ​ဒေက အ​ဖြေမှန်​အဖြစ်​ထင်​ရှားသွားပါတယ်​။ ​မွေးစားထားတဲ့ အရွယ်​​ရောက်​လာပြီးက​လေးတစ်​​ယောက်​ခြင်းကလည်း ​နောက်​ထက်​က​လေးနှစ်​​ယောက်​ကို ဆင့်​ကဲဆင့်​ကဲ​မွေးစားကြလိမ့်​အုံးမယ်​၊ ကဲ ဒါဆိုရင်​...မွတ်​ကလား​တွေဆိုတာကလည်း မိသားစုတစ်​ခုမှာ လူအ​ယောက်​ ၂၀ ​ကျော်​ ၃၀ ​လောက်​ရှိ​ကြတဲ့ မိသားစု​တွေကခပ်​များများရယ်​။ လူအ​ယောက်​ ၂၀ ရှိတဲ့ မွတ်​မိသားစုတစ်​စုက တစ်​ဦးကို နှစ်​​ယောက်​နှုန်းဖြင့်​ ​နောက်​ထက်​က​လေးအ​ယောက်​ ၄၀​လောက်​ကို ဆက်​လက်မွေးစားပိုင်​ခွင့်​ရသွား​လေ​တော့ မွတ်​မိသားစုတစ်​ခုထဲမှာကို လူဦး​ရေသုံးဆ ဖြစ်​မသွား​ပေဘူးလား။ ဒီလိုဆိုရင်​ အထက်​က ကိုနီ​ပြောခဲ့တဲ့ မွတ်​ဆလင်​ ၁၀ % မှသည်​ ​မွေးစားခွင့်​ဥပ​ဒေအတိုင်း နှစ်​ဆထက်​တိုးလိုက်​ရင်​ မကြာခင်​ ၄ - ၅ နှစ်​အတွင်း ​ချက်​ခြင်းလက်​ငင်းကြီး ၃၀% ဖြစ်​သွားပြီ​ပေါ့ အဲ့ဒီ ၃၀% ရှိလာတဲ့ကလား​တွေကလည်း အလကား​နေကြမယ်​များထင်​​နေလို့လား၊ သူတို့ကလည်း ​မွေးစားခွင့်​ဥပ​ဒေအတိုင်း ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်​က​လေး​တွေ​ကော၊ ဒုက္ခသည်​မဟုတ်​တဲ့ ဘင်္ဂလား​ဒေ့က သူတို့အမျိုးက​လေး​တွေကို​ကော ထက်​ဆင့်​ထက်​ဆင့်​ပြီး ​မွေးစားကြအုံးမယ်​ဆိုရင်​၊ ​နောင်​လာမယ့်​ဆယ်​နှစ်​​ကျော်​ သက္ကရာဇ်​ ၂၀၃၀ ​ကျော်​လောက်​မှာ​တော့ မွတ်​ကလား​တွေရဲ့အင်​အားဟာ မြန်​မာပြည်​ထက်​ဝက်​​ကျော်​သွားပြီ​ပေါ့ဗျာ ခံလိုက်​​ပေအုံး ခံ​ပေအုံး​တော့ ​ရွှေမြန်​မာ ​တိုင်းရင်းသားအ​ပေါင်းတို့​ရေ။ အဲ... စကားမစပ်​ ကလားကြီးဝင်​လာမယ်​ထင်​မ​နေနဲ့ တရုပ်​​တွေ အိန္ဒိယ​တွေကလည်း ဒီအခွင့်​​ရေးကြီးကို ဝမ်းပန်းတစ်​သာ ကြိုဆို​နေကြပါတယ်​ခင်​ဗျ။ အကုန်လုံးကို ခြုံငုံရလျင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ...... . ၁) ကိုယ့်နိုင်ငံထဲကို ရွှေ့ပြောင်းလာမယ့်သူတွေကို GCM စာချုပ်ထွက်လာပြီး လက်မှတ်ထိုးပြီးလျင် လက်ခံဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပီ...... . ၂) ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေကနေ မွေးဖွားလာမယ့် ကလေးတွေအတွက် မွေးစာရင်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပီ........ . ၃) ICCPR ကို ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒိ မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ နိုင်ငံသား တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိနေပါပီ....... . ၄) နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့ အဲ့ဒိလူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံက အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသွားပါပီ....... . ဒါတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က လစ်ဘရယ်တွေရဲ့ ခေတ်သစ်နယ်ခြဲ့နည်းပါပဲ....... သေနတ်ဖောက်စရာမလိုပဲ နယ်မြေတွေကို သိမ်းယူခြင်းသာ........ တနည်းအားဖြင့် အ သူ ခံရမယ့်အခြေအနေပါ......... .
24 Jul 2019 · 17K views